नेपालका दलितलाई यसरी बुझौँ कि ! - नेपालका दलितलाई यसरी बुझौँ कि !
नेपालका दलितलाई यसरी बुझौँ कि !
नेपालबहस संवाददाता २०७५, १४ कार्तिक, 06:32:55 PM
♦ रामशंकर लकान्द्री ♦
मलाई यो समाजले ‘कामी’ भन्ने गरेको छ । छुवाछुत, उपेक्षा र तिरस्कार भोग्नु त छँदैछ, जसो गर्दा पनि जश नदिने समाज हाम्रा अगाडि पहाड झैँ उभिएको छ । उपमा हेर्नुस् त, हामीले अलिक सुकिला लुगा लगायौँ भने ‘कामीको बेहुलो जस्तो’ भनिदिन्छन् । अलिक धैलोमैलो देखे भने ‘आरनमा बसेको कामीजस्तो’ भन्न थाल्छन् । हामीले कस्तो हुँदाचाहिँ यो समाजलाई उपयुक्त लाग्ने ?
त्यसैले इन्द्र रिजालजीको यो ‘नेपाल बहस’ अनलाइनमा म आज न्यायको लागि आगो ओकल्नेवाला छु । केही कुरा हामीलाई अछुत र दलित बनाउनेलाई भन्नेछु । केही कुरा दलितलाई संस्थागत र स्थायित्व बनाएर त्यसको आम्दानी खाने ‘दलित आन्दोलन’ का ठेकेदारलाई पनि छ्यास्ने छु । अनि केही कुरा फोहोरी भएर दलित नै हुन खोज्ने हाम्रा परम्परागत कमी कमजोरीलाई बाँकी राख्ने छैन ।
‘दलित’ भन्ने शब्द सर्वप्रथम उन्नाइसौँ शताब्दीमा तत्कालीन समाजमा “अछुत” जातिमाथि गरिएको अत्याचार र यातनाको उल्लेख गर्ने क्रममा भारतको महाराष्ट्रका ज्योतिराव फुलेले गरेका थिए । ‘शूद्र’, “उत्पीडित जाति” “हरिजन”का साथै ‘परिगणित जाति’ पनि भन्ने गरिन्छ । भारतमा एउटा श्लोक नै सुनिन्छ– “ढोल, गवार, पशु, शूद्र, नारी ÷ यस सब है ताड्न के अधिकारी” ।
नेपाललगायत भारत, बाङ्लादेश, श्रीलङ्का आदि दक्षिण एशियाली मुलुकमा जातीय भेदभाव र छुवाछुत प्रथाको चर्को समस्या रहिआएको छ । त्यसो त, पुरानो युगमा जापानको बुराकुमिन जाति, कोरियाको बाएक्जओङ् जाति र सोमालियाको मिद्गन जातिलाई पनि दलितसरह ब्यवहार गर्ने गरिएको पाइन्छ ।
कागजमा छुवाछुत प्रथा हटेको छ, तर जनजीवनमा कहाँ हटेको छ ? गाउँमा धारो–कुवा पनि चलाउन नपाइने, शहरमा डेरा नपाइने समस्याले कहाँ छोडेको छ ? छुवाछुत प्रथा हटायौँ भन्ने माओवादीको मुखिया (प्रचण्ड) कै घरमा छुवाछुत र दलित भनेर ठूलो भेद गरिन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ सुरक्षाका लागि खटाइएका जनमुक्ति सेनाका एक दलित लडाकु विष्णु परियारले भनेका हुन् ।
प्रचण्डपत्नी सीताको बडीगार्ड र साथी हुने खालको एकजना महिलालाई पठाइदिनु भनेकोमा पठाउने जनमुक्ति सेनाले विश्वकर्मा (कामी) युवती पठाइदिएछ । सीताले सोधिन् रे, “बहिनी कुन प्लाटुनबाट आएको ?” “पूरा नाम के हो ?” उनले आफ्नो थरसहित परिचयको बेलीबिस्तार बताउना साथ सीताले भनिछन्, “बहिनी, अहिले मलाई त्यस्तो कोही साथी चाहिएको छैन । चाहिएछ भने तपाईलाई नै बोलाउँला । अहिले जानुहोस् है !”
बाग्लुङ्को एउटा चौतारोमा एकजना ब्राम्हणसँग उहाँले शास्त्रार्थ गर्नुभएछ । ती बाहुनले ठानेछन्, यी पनि कतैका बाहुन् होलान् । शास्त्रार्थ गरुन्जेल हजुर र तपाई भनेर उहाँलाई संवोधन गर्दै थिए रे । जब पद्मसिंहजीेले आफ्नो पूरा परिचय दिनु भयो, थर विश्वकर्मा भन्ने थाहा पाएपछि ती बाहुन् त पद्मसिंहजीलाई ‘तिमी’ मा झारेर पो कुरा गर्न थालेछन् ।
माओवादी फुटेर वैद्यहरू अर्कै माओवादी गठन गरेपछि प्रचण्ड रक्सी खाएर धूत भएका दिन घरमा वैद्यका बिरूद्ध फत्फताउँदा रहेछन्, “के के नै गर्छु भनेर डाङ्ग्रा (खड्गबहादुर विश्वकर्मा) का पछि लागेका छन् । केही नापिनेवाला छैन ।” अनि यस्ताबाट केही होला भन्ने आशा गर्नु त झर्छ र खाउँला भनेर साँढेको पछि लाग्नु जस्तै भएन ? थाहा पाउनु नै भयो होला, काभ्रेमा पहिलेका एक ठूलै एमालेका नेताले कुवामा पानी भर्न आएकी ‘सर्किनी’ को गाग्रो खोसेर फुटाइदिएर गाली बेइज्जती गरेको ।
संस्कृतका उद्भट विद्वानसमेत मानिएका प्रजातन्त्रवादी नेता, राष्ट्रिय दलित आयोगका पूर्व अध्यक्ष स्व. पद्मसिंह विश्वकर्मा सुनाउनुहुन्थ्यो । बाग्लुङ्को एउटा चौतारोमा एकजना ब्राम्हणसँग उहाँले शास्त्रार्थ गर्नुभएछ । ती बाहुनले ठानेछन्, यी पनि कतैका बाहुन् होलान् । शास्त्रार्थ गरुन्जेल हजुर र तपाई भनेर उहाँलाई संवोधन गर्दै थिए रे । जब पद्मसिंहजीेले आफ्नो पूरा परिचय दिनु भयो, थर विश्वकर्मा भन्ने थाहा पाएपछि ती बाहुन् त पद्मसिंहजीलाई ‘तिमी’ मा झारेर पो कुरा गर्न थालेछन् । त्यो दिन जति आश्चर्य र खेदजनक अवस्था मलाई कहिल्यै आएजस्तो लाग्दैन । हाम्रो समाजको अवस्था आज पनि हुबहु यस्तै छ, रौँ फरक छैन ।
हिन्दू वर्णाश्रम प्रथा अनुसार “शूद्र” का नाममा गरिँदै आएको अक्षम्य तथा अपराधजन्य भेदभाव नै मानव विकासको प्रमुख वाधक हो । दलितको सीप चल्ने तर पानी नचल्ने विसङ्गति आफैँमा मानव सभ्यतामाथिको क्रुरतापूर्ण अन्याय हो । दलितले कथित उच्च जातलाई ‘हजुर’ भन्नुपर्ने तर दलित जातिलाई कथित उच्च जातिले ‘तँ’ भन्ने कुप्रथा यातना र अत्याचारको टड्कारो रुप हो ।
अनि यसलाई संस्थागत रुप दिएर, समावेशिताका नाममा कोटामा रमाएर, विदेशीले खटाएको मानो खाएर यहाँ एक थरी दलितका नाममा फ्याउरे नेताहरू शहर–बजारमा विलासितापूर्ण गुजारा गरिरहेका छन् ।
दलितको समस्या लोकले चिनेको र समाजले औँल्याएको छ । राणाकालमा दलित समुदायको मामिला हेर्नका लागि सोही जातिको सरदार वा अगुवाको रुपमा “मिजार” नियुक्त गरिन्थ्यो । कतिपयले यसलाई थरका रूपमा पनि प्रचलनमा ल्याए । पश्चिम नेपालमा सुनारलाई पनि मिजार भन्ने गरिन्छ । हामीलाई ‘मिजार’ (मिझार) भन्ने परिपाटी जीवित रहुन्जेल यो छुवाछुत कायमै रहन्छ । अनि यसलाई संस्थागत रुप दिएर, समावेशिताका नाममा कोटामा रमाएर, विदेशीले खटाएको मानो खाएर यहाँ एक थरी दलितका नाममा फ्याउरे नेताहरू शहर–बजारमा विलासितापूर्ण गुजारा गरिरहेका छन् ।
अन्य जातिको उपेक्षा, तिरस्कार र बञ्चितीकरण यसै पनि छँदैछ, त्यसमाथि कुपोषण, अशिक्षा, अन्धविश्वास, बालविवाह, घरेलुहिंसा, शोषण, चेलीबेटी बेचबिखनजस्ता यातना र पीडाबाट दलित समुदाय मुक्त हुन अझै टाढाको कुरा जस्तो लाग्दछ । यद्यपि नयाँ पुस्तामा उत्साही तथा परिवर्तनकारी सामाजिक अभियन्ताहरूको आशालाग्दो संख्यामा गतिविधि देखापर्न थालेको छ । अन्य जातिसँग बिहाबारी, सहभोज, शहरी क्षेत्रका सार्वजनिक स्थानमा छुवाछुत प्रथाको प्रायः अन्त्य आदि उल्लेखनीय सकारात्मक पक्ष हुन् ।
कथित उचो र तल्लो जातका बीच मात्र होइन, दलितभित्रै पनि छुवाछुत र जातिभेदको खतरनाक अवस्था छ । पोडेले पकाएको गाइनेले नखाने, गाइनेले पकाएको दमाईले नखाने, दमाईले पकाएको सार्कीले नखाने, सार्कीले पकाएको कामीले नखाने हुदाँहुदै कामीले पकाएको मगरले नखाने, मगरले पकाएको ठकुरीले नखाने, ठकुरीले पकाएको झर्रा क्षेत्रीले नखाने, क्षेत्रीले पकाएको जैशी बाहुनले नखाने, जैशी बाहुनले पकाएको उपाध्याय बाहुनले नखाने यस्तो पत्रेदार छुवाछुत प्रथाले नेपाली समाजलाई जकड्याएकै छ ।
फोहोरले पनि दलित बनाउँछ । सरसफाईमा ध्यान दिने दलितको कुरा वजनदार हुन्छ । फोहोरी र धैलोमैलो भयो, बासी, सडेगलेको, सिनो र फोहोर खानथाल्यो भने बाहुनलाई पनि दलित नै भन्न मन लाग्छ । कथित उचो र तल्लो जातका बीच मात्र होइन, दलितभित्रै पनि छुवाछुत र जातिभेदको खतरनाक अवस्था छ । पोडेले पकाएको गाइनेले नखाने, गाइनेले पकाएको दमाईले नखाने, दमाईले पकाएको सार्कीले नखाने, सार्कीले पकाएको कामीले नखाने हुदाँहुदै कामीले पकाएको मगरले नखाने, मगरले पकाएको ठकुरीले नखाने, ठकुरीले पकाएको झर्रा क्षेत्रीले नखाने, क्षेत्रीले पकाएको जैशी बाहुनले नखाने, जैशी बाहुनले पकाएको उपाध्याय बाहुनले नखाने यस्तो पत्रेदार छुवाछुत प्रथाले नेपाली समाजलाई जकड्याएकै छ ।
हामीले अन्य जातिको समानता खोज्नु त छँदैछ, कथित दलित भित्रकै असमानता, छुवाछुत र उचनीचको रबैयाबाट कहिले मुक्ति पाउने ? कास्कीमा एउटा सहभोजको आयोजना गर्ने भएछन् । दलितहरू भान्से हुनुपर्ने । कामी, सार्की, दमाई, गाईने आदि सबै किसिमका दलित मिलाएर खाना पकाउन भनेपछि दलितभित्रै को ठूलो र कसले पकाएको कसले नखाने भन्नेमा विवाद र हात हालाहालको अवस्था आएछ ।
दलितभित्रै दलित र छुवाछुत
पहाडी दलित जाति मुख्यतः सात किसिमका, कामी, दमाई, सार्की, बादी, गाईने, सुनार र चुनारा छन् भने तराईमा यो संख्या ३५ छ— अघोरी, बाँतर, भिल्ल, भुनिया, चमार÷मोची/हरिजन, चिडीमार, धोबी, धुनियाँ (मुस्लिम), डुम/डोम÷ढाँगर, दुसाध, गान्धर्व (मुस्लिम), गुडीहारा, हलखोर, झाँगड (उँरावँ/उरम), झाँगर, करोकी (यादव जातिमा पर्ने दलित), सोनी, खत्वे, किच्चक, किसान, कोचे, मिर्शिकार, मुण्डा, मुसहर (सदा), नट, पामरिया, पासी, पासवान, रचवार, सन्ताल (सतार), शाई (मुस्लिम), सर्भाङ्गा, टाँटी, तत्मा र टुरी ।
नेवार जाति भित्र पर्ने दलितको आफ्नै स्वरूप र पहिचान छ । तिनीहरूमा च्यामे, कुचे, कुसुले र पोडे मूख्य छन् । नेवार यस्तो जातीय समुदाय हो, त्यहाँभित्र जनै लगाउनेदेखि सनही बजाउनेसम्मका जाति छन् ।
आज देशको जनसंख्या लगभग तीन करोड पुग्दा दलितको जनसंख्या ३५ लाखभन्दा माथि पुगिसकेको छ । दलितसम्बन्धी संघ–संस्थाले नेपालमा दलितको कुल संख्या ४० लाख पुगेको भनेका छन् । मेरा (कामीका) अन्य थरधारीहरू यिनै हुन्– आफलधोती, आचार्य, आग्री, बाँस्कोटा, बराइली÷बराल, भट्ट, भट्टराई, भूल, भूसाल, बिपाली, बुन्छेभाले, चाम्लिङ् (राई), चन्दारा/चन्दारो, छिस्ताल, चिलिमे, चुनारा, दहाल, दलामी, दर्नाल, दयाल÷दियाली, देउपाते, देवल, धमला, धानिक, दुध्राज, दुराल,गदाली, गदाल, घताने (गहतराज), गजमेर, गजुरेल, घमाल, घामघोट्ले, घतानी, घिमिरे (सोभ),घोताने, गिरि, गोतामे, गोवा, हिमच्युरी, जन्डकामी, कन्डरा, कैनी, कालीकोटे, कालिराज(साहु), कल्लोहर, कसरा, खाडकाठोकी, खपाङ्गी, खाती, कोइराला, कोली, कुमकी, लबद, लकान्द्री, लामगादे, लामाकर्मी, लामिछाने, लाटोपी, लोहार, ल्वागुन, महिलपार, महर, मिझार, नगरकोटी, नेपाल, निरौला, पाध्यावति, पाग्री, पहरी, पल्लाय, पन्थी, पराजुली, पार्की, पोखरेल, पोर्तेल, पुलामी, रहपाल, राजकाल, राजिलोहार, रामदामु, रसाइली, रिजाल, रिसाल, रूचाल, सदासंकर÷सत्तसंकर, सापकोटा, सेतीमहरा, सेतीपार, सेतीसुराल,साहसंकर,शेरला, सिजापति, सिँगौरे, सिर्पाली (शिर्पाली), सुनाम, सुन्चिउरी, सुन्धुवा, सुनी, टमाटा, ठगुन्ना, ठटेरा, तिरुवा, तिवारी, वोड, वोखेडा ।
परियार, दर्जी, नेपाली आदि थरवोधक शब्द ‘दमाई’ जातीमा प्रचलित छ । तर पूर्वी नेपालमा दमाई शब्द र पश्चिम नेपालमा ढोली शब्दलाई अपमानजनक मानिन्छ । यो समुदाय पनि देशभरि नै यी थरमा बसोबास गरेको छ :- आउजी, आससाई, बागचन, बागदास, बाहक, बर्देव, भण्डारी, भित्रीकोटी,भुसाल, बूढाप्रिथी, बुढापोथी, चाहार, छिनाल, चुहान, दमाईपरेल, दमापरियार, दर्नाल, दास, डाउँडे, देउदास, देवल, ध्याकी, गौतम (गोतामे), घले, घतानी, गुँइडे, हिङ्माङ्, हुड्के, जैरू, कालाखाती, कार्कीढोली, कटुवाल, खतिवडा, कोइराला, लामघाटे, लुईटेल, मगर, मैनाली, महरा, महटे, माले, नगर्ची, नागवाग, नागवान, नौबाग, नेगी, नेपाल, पञ्चकोटी, परियार (अछामे, चुडाल), पोखरेल, राईगाईँ, रैका, राना, रानपँहेली, रानपाल, रत्न÷रत्ने, रत्नपरियार, ¥याईझ्याइँ, समुद्रसाई, सासमुन्द्रा, शहस्सामुद्रा, शिहाल, शिनाल, शिवा, सूजी, सुदास, सुनाल, सुनाम, सुन्च्युरी, ठगुन्ना, थापा, ठटाल र तिखत्री/तिवारी ।
पश्चिम नेपालमा सार्कीका दुई तह पाइन्छ— जातसहित र जातरहित । सार्की जाति पनि देशभरि नै यी थरका साथ फैलिएर बसेको छ— अछामी, बमरेल, बाहुन, बस्ताकोटी, बसेल, बयलकोटी, भङ्ग्याल, भेँयाल/भुल, भुर्तेल, चमार, छमार्की, छत्कुली, चुडाल, चुहान, दाबे, डाले, गैरेपिपन, घिमिरे, गिरि, गोठे, हिताङ्, कमर, खतिवडा, कोइराला, लम्जेल, लम्साल, मज्बोटी, माल्बोक, माल्बुले,मगराती, मुडेल, नघाली, पहेँली, पुर्कोटी, रम्तेल, रोक्का, रोइला, रूचाल, सारमौटे, सेजुवाल, शाही, सिरिमाल, सिरौटे, सुर्खेनी, सुयेनी, ठगुन्ना, थाक, थाकुस्र्या, ठाडाराई, टोगी, उपरकोटी र उप्रेती ।
त्यसैगरी पहाडी दलितमा अर्को महत्वपूर्ण जात हो गान्धर्भ वा गाईने । पश्चिम र मध्यपश्चिमका जिल्लाहरू, कास्की, गोर्खा, तनहुँ, स्याङ्जा, पाल्पा, रूपन्देही, गुल्मी, सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, रूकुम, प्युठान, दाङ्, सल्यान, जुम्ला र पूर्वमा भोजपुरमा गान्धर्भ जातिको मुख्य बसोवासो रहेको छ । गान्धर्भहरूको थर पनि क्षेत्री–ब्राम्हण जातिका थरसँग मिल्दोजुल्दो छ :- बाहुन, बइस्ट/बिष्ट, बैकार/वाज्ञकार, भुसाल, भुसालपर्वते, विष्णुपाद, विश्वकर्मा, बोगटे, बुढाथोकी, गोसाई, हुक्चिङ्ग्रण, जोगी, कालापौडेल, कालाकौशिक, कालीचान, कामी, महेश्वर, मेघनाथ, साई, समुद्री, सेतापर्वते, सेतीचन, सुरसमन, ठकुरी र तुर्की ।
मल्लकालमा यदि कथित “शूद्र”ले तागाधारी जातीको महिलासँग शारिरिक सम्बन्ध राखेको पाइयो भने “चाण्डाल” (जल्लाद) लगाएर लिङ्ग काटी उसैलाई खुवाउने गरिन्थ्यो ।
हाम्रो आदि–धर्मशास्त्र वेदले कतै पनि आजको जस्तो जातीय विभेद गरेको छैन, तर धर्मशास्त्रको गलत ब्याख्या र दुरूपयोग अनियन्त्रित हुँदै गएपछि जन्मजात माथिल्लो जात वा तल्लो जात हुने अभ्यास प्राचीन कालदेखि हुन थाल्यो । यस्तो भेदभाव रच्नेलाई चाहिँ दलित भन्नुपर्ने हो ।
किँरातकालबाहेक लिच्छबी, मल्ल, राणा र शाहकालहरूमा जातिका आधारमा सँजाय दिइन्थ्यो ।
ब्राम्हणलाई जघन्य अपराध गरेपनि मृत्युदण्ड दिइन्नथ्यो, तर “अछुत”ले सामान्य गल्ती गरेपनि पाशविक यातना र कडाभन्दा कडा सँजाय दिइन्थ्यो । उदाहरणकालागि मल्लकालमा यदि कथित “शूद्र”ले तागाधारी जातीको महिलासँग शारिरिक सम्बन्ध राखेको पाइयो भने “चाण्डाल” (जल्लाद) लगाएर लिङ्ग काटी उसैलाई खुवाउने गरिन्थ्यो । राजा राजेन्द्र्र शाहको शासनकालमा बि.सं. १८९३ असारमा जारी गरिएको कानुनअनुसार दमाई, कामी, सार्की, बलामी, माझी, दनुवार, मुर्मी, भोटे, चेपाङ् र कुमाल जस्ता जातिहरूका लागि गल्तीवापत मृत्युदण्डकै सँजाय तोकिएको थियो । अन्य जातिबाट गरिएका त्यस्तै गल्तीवापत कम सँजाय दिने गरिन्थ्यो ।
मध्ययुगमा आइपुग्दा छुवाछुत प्रथाका आधारमा चार किसिमका जातीमा नेपाली समाजलाई विभाजित गरियो— पहिलो, तागाधारी जाति, जो जनै लगाउँछन् । दोस्रो मतवाली :- जसमा (क) नामस्याने मतवाली, जो मद्यपान गर्दछन् तर दासत्वमा पर्दैनन् र (ख) मस्याने मतवाली, जो दासत्वमा परेका थिए/छन् र मद्यपान गर्ने गर्दछन् । तेस्रो खालको जातीमा, पानी नचल्ने तर छोइछिटो हाल्नु नपर्ने जाति र चौथोमा पानी नचल्ने र छोइछिटो पनि हाल्नुपर्ने “अछुत” जाती । राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुरले बेलायत यात्रापछि आफ्ना लागि समेत तत्कालीन ऐनमा केही संशोधन गरेर “प्रायश्चित्त”को ब्यवस्था गरेका थिए, तै पनि जातीय भेद र दलितमाथिको अत्याचारमा कमी थिएन ।
चौतर्फी पछौटेपन :-
दलित जातिमा साक्षरताको स्तर खासै बृद्धि भएको छैन । त्यो बेला मुस्किलले ४३ प्रतिशत दलित साक्षर थिए, जबकि देशको औसत साक्षरता स्थिति ४८.१९ प्रतिशतमा थियो । तराईका छ वर्ष वा त्योभन्दा माथिको उमेरका ७६ प्रतिशत बालबालिकाहरू विद्यालय जानबाट वञ्चित रहँदैआएका छन् । एक कक्षामा भर्ना भएकामध्ये ४१ प्रतिशतले पाँचकक्षासम्मको पढाई पूरा नगरी बीचैमा छाड्दछन् । निम्नमाध्यमिक र माध्यमिक विद्यालयमा भर्ना भएका कुल बालिबालिकामध्ये दलितका छोराछोरी क्रमशः सात र पाँच प्रतिशतमात्र रहेका छन् ।
करिब ५४ प्रतिशत दलित जनता भूमिहिन छन् । गैरसरकारी क्षेत्रको विकासका निकायहरूमा दलित जनशक्ति पुग–नपुग ४ प्रतिशत मात्र छ । सरकारी निकायमा त यो संख्या झनै कम देखिन्छ । कुल महिला सरदर आयु करिब ६० वर्ष पुगेको छ, तर दलित महिलाको सरदर आयु ४९ वर्षभन्दा माथि जान सकेको छैन ।
तर यी अधिकांश संस्थाहरू दलित प्रथाको उन्मूलन गरी समतामूलक समाजको स्थापनाका लागि होइन गरिब दलित देखाएर आफ्नो दुनो सोझ्याउने निहित स्वार्थबाट खोलिएका हत्कण्डा हुन् । भ्रम छैन । दलितले दलितमाथि घोडा चढिरहेको छ, दलितले दलितलाई भजाएर हसुरिरहेको छ, दलितले दलितलाई थप दलित बनाइरहेको छ ।
२०५३ सालमा दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ स्थापना भयो । दलित जातिको पक्षमा काम गर्ने संघ–संस्थाहरूको यो एक छाता सङ्गठन हो, जसमा करिब तीनसय सघ–संस्थाहरू सदस्य रहेका छन् । तर यी अधिकांश संस्थाहरू दलित प्रथाको उन्मूलन गरी समतामूलक समाजको स्थापनाका लागि होइन गरिब दलित देखाएर आफ्नो दुनो सोझ्याउने निहित स्वार्थबाट खोलिएका हत्कण्डा हुन् । भ्रम छैन । दलितले दलितमाथि घोडा चढिरहेको छ, दलितले दलितलाई भजाएर हसुरिरहेको छ, दलितले दलितलाई थप दलित बनाइरहेको छ ।
राष्ट्रलाई योगदान :-
नेपाल राष्ट्रको एकीकरणको समयदेखि नै दलित जातिले राष्ट्रनिर्माणमा अद्वितीय भूमिका निर्वाह गरेका छन् । सेनाका लागि बन्दुक, खुँडा, खुकुरी, तरबार जस्ता हतियार बनाइदिने, सेनाको पोशाक, जुत्ता र बन्दोवस्तीका सामान बनाइदिने काम दलितहरूबाटै भयो ।
गान्धर्भहरूले गाउँगाउँ पुगेर एकीकरणका पक्षमा गीत सवाई र श्लोक गाएर जनमानसमा उत्साहको वातावरण बनाइदिएका थिए भने सेनाको मनोबल बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए । पृथ्वीनारायण शाहका पालामा गोर्खाका दलित प्रौढ बिसे नगर्ची आजपर्यन्त उदाहरणीय र आदर्शका रूपमा प्रतिष्ठित हुनुहुन्छ । उहाँले पृथ्वीनारायण शाहलाई दिएको सल्लाहको प्रभाव कालजयी रूपमा जीवित छ ।
तागाधारीको युक्तिमात्र होइन, जनजातिको शक्ति र दलितको सृजनशील भक्तिले नै यो राष्ट्र खडा भएको हो । त्यसैले दलित जातिको अपमान र भेदभाव सिङ्गो नेपालकै अपमान हो ।
मुक्ति र प्रगतिको बाटो खोज्दैजाँदा माओवादीले दलितलाई नै मराएर आफ्नो दुनो सोझ्यायो । सोझो दलित शहिद भयो, बाठो बाहुन प्रधानमन्त्री, मन्त्री, नेता, गण्यमान्य भयो । दलितले कहाँ आफ्नो राज्य पाए ?
२०६२–६३ को जनआन्दोलनमा शहिद हुनुभएका सेतु बि.क. वा चन्द्र बयलकोटी, मोहम्मद जहाँगिर वा ताहिर अन्सारी, राष्ट्रको आवश्यकताका समयमा दलित समुदायले जीवनकै बली चढाउने त्याग र हिम्मत सावित गरेका छन् । तागाधारीको युक्तिमात्र होइन, जनजातिको शक्ति र दलितको सृजनशील भक्तिले नै यो राष्ट्र खडा भएको हो । त्यसैले दलित जातिको अपमान र भेदभाव सिङ्गो नेपालकै अपमान हो ।
बरू काँग्रेसले बि.सं. २००९ सालमा धनमानसिंह परियारलाई पार्टीको महामन्त्री बनाएर आफ्नो प्रतिष्ठामा चार चाँद लगायो । उहाँलगायत देबब्रत (डीबी) परियार, आरबी गहतराज, लख्खिदेवी सुन्दास, फत्तेबहादुर नेपाली, ठाकुरकुमार पार्थिव, मास्टर रामस्वरूप आदि पार्टीका संस्थापक भए । काँग्रेस स्थापनाको पहिलो बैठक दलितकै घरको छतमा भयो । तर आज आएर दलितलाई फगत भोट बैंक बनाउने र दलितको रगत–पसिनाले बनेको बलिदानलाई भजाउँदै सत्तामा पुग्ने बेइमानीपूर्ण राजनीति चलिरहेको छ । दलित जातिको योभन्दा चर्को शोषण अरू के हुनसक्छ ?
दलित कस्तो हुँदाचाहिँ यो समाजलाई उपयुक्त लाग्ने ? अबको कार्यभार :-
पोशाक वा जुत्ता बनाउने, काठ माटा तथा धातुका भाँडाकुँडा, औजार–उपकरण, गहना, देवीदेवताका मूर्ति बनाउने, बाजा बजाउने, नाचगान तथा वातावरण रमणीय बनाउने, सरसफाई गरिदिने कामबाट शदियौँदेखि समाजको सेवा गर्दैआएको यो जाति ‘दलित’ भनिने हेयवोधक पहिचानमा राखिनु पनि अर्को अन्याय नै हो ।
अबको समाजमा यस्ता काम गर्ने जाति वा समुदायको सर्वाेपरि स्थान, कदर र इज्जत हुनुपर्छ । साथै युद्धस्तरमा विशेष कार्यक्रम र प्रतिबद्धता व्यक्त गरी कामको थालनी गर्नुपर्दछ—
१. सम्पूर्ण दलित वस्तीमा तीनवर्ष भित्रमा स्वच्छ पिउने पानी पु¥याउने,
२. शतप्रतिशत दलितलाई शिक्षा र साक्षरता दिन विशेष कार्यक्रम लागु गर्ने । यसमा हुनसक्ने ढिलासुस्ती, अख्तियार दुरूपयोग, वाधा व्यवधानलाई रोक्न समाजविरोधी अपराधका रूपमा दण्डको, र प्रशंसनीय कार्य गरेवापत पुरस्कारको कानुनी व्यवस्थाका साथै, कार्यक्रमको रेखदेख, अनुगमन, मूल्याङ्कन आदिका लागि ‘हिट–स्क्वाड’ को समेत ब्यवस्था गरी लागु गर्ने,
३. दलितका सीप, कला, कौशलको विकासका साथै उनीहरूको आय आर्जनको भरपर्दो व्यवस्थाका लागि विनाधितो ऋण, बजार तथा बिक्रीको ग्यारेण्टी, उद्यम तथा उत्पादनका लागि व्यवस्थापन वा सीप विकास तालीमको सर्वसुलभ रूपमा सञ्चालन गर्ने ।
४. दलितका नाममा स्थापित सम्पूर्ण संघ–संस्थाहरूलाई केन्द्र वा शहरमुखी र कागजी विकासमा सीमित हुन नदिई उद्येश्यअनुरूपका स्थलगत कर्तब्यमा प्रवृत्त गराउन उपर्युक्त हिट–स्क्वाडलाई जिम्मेवारी दिने,
५. दलित समाजमा विद्यमान संकोच, अन्धविश्वास, कुलत हटाउनुका साथै परिवार नियोजन, सरसफाइ, वातावरण संरक्षणका चेतना जागरण गराउन विशेष कार्यक्रम लागु गर्ने, सामाजिक हेलमेल तथा जातीय समानताको अभियानलाई हरतरहबाट प्रबद्र्धन गर्ने ।
छिपछिपे ज्ञान र टालटुले समाधानबाट अपेक्षित सफलता हासिल हुँदैन भन्ने यथार्थलाई सबैले कार्यरूपमा अपनाउनु नै दलितका लागि सबैभन्दा गहकिलो न्यायिक ब्यवहार हुनेछ । आजसम्म भए गरिएका निर्णयहरूको इमानदारीपूर्वक पूर्ण कार्यान्वयन आजको एकमात्र अनिवार्यता हो ।
हामी माग्ने होइनौँ तर ती निर्णय इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन र लागु गरिएन भने अबको लोकतान्त्रिक आन्दोलन नै दलितहरूको राष्ट्रिय आन्दोलन हो । खबरदार !
२०७५, १४ कार्तिक, 06:32:55 PM